တစ်ပတ်ဖီဖာ 19 23 ရေးအဖွဲ့: ကစားသမားစာရင်းတွင်တစ်ပြန်လည်သုံးသပ် - ဂိမ်းပြဿနာများ - 2019
EA ၏စတူဒီယိုထဲကနေ developer များဖီဖာ 19 ထိုရက်သတ္တပတ်၏ XXIII ကစားသမားအဖွဲ့သည်ပေးအပ်သည်။ အထဲတွင်ပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်၏သူရဲကောင်းများဖြစ်ကြသည်ပြည်တွင်းချန်ပီယံပွဲစဉ်အတွက်အောင်ပွဲဖို့သူ့အဖွဲ့ဆောင်ကြဉ်းနိုင်ခဲ့သည်။
တစ်ပတ် XXIII ဖီဖာ 19 အဖွဲ့များ၏ဖွဲ့စည်းမှု
ထိုရက်သတ္တပတ်၏အဖွဲ့တံခါးမှာဇန်နဝါရီ Oblak ဖြစ်ပါတယ်။ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်စလိုဗေးနီးဂိုးသမားနှင့်အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်တံခါးစောင့်ရှောက် Rayo Vallecano တိုက်ခိုက်ခြင်းကနေပစ်မှတ်အပေါ်ခြောက်လရိုက်ချက်များကို ယူ. သူ၏ကလပ်အရှိဆုံးကွာရှုပ်ထွေးဂိမ်းထဲမှာ 0-1 တစ်ရမှတ်နှင့်အတူအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါကဒ်အသစ်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးမယ့်တဦးတည်းအမှတ်ရုပ်သိမ်းနှင့် ပို. ပင်နှစ်လိုဖွယ်စပိန်, La လိဂ်၏ပရိသတ်များ၏ပရိသတ်အဘို့ဖြစ်လာသည်။ ဂိုးသမားဟာဖဲကြိုးအပေါ်ကောင်းစွာအဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ်, နှင့်ရလဒ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူကြီးနှင့်ဂိမ်းအတွက်အကောင်းဆုံးအစောင့်အထိန်းတစ်ဦးဖြစ်နေဆဲအဖြစ်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီး။
အလယ်ပိုင်းကာကွယ်ရေးအတွက်ဥရောပမှာရှိတဲ့ဦးဆောင်ပြိုင်ပွဲများတွင်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က၏သူရဲကောင်းများအခြေချခဲ့သည်။ PSG အသင်းနောက်ခံလူ Marquinhos အလျှော့ Saint-Etienne နှင့်အတူကွယ်ပျောက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်သူ၏ကလပ်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ဘရာဇီးပိုက်ကွန်ကို2နမူနာများနှင့် 92% တိကျဂီယာ၏အကောင့်တွင်။ အတော်များများကတိုက်ခိုက်မှုကလပ်ဒီ tsentrbeka နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။
EA ၏3မှတ်အားဖြင့်နောက်ခံလူထိုက်တန်အဆင့်မြှင့်ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ Marquinhos ပင်ပိုမိုမြန်ဆန်ယခုဖြစ်ပါသည်, နှင့်သူ့တိုးတက်လာသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ data တွေကိုရာထူးများအတွက်ရန်ပွဲများတွင်ခန္ဓာကိုယ်ထား ပို. ပင်စိတ်ချလက်ချခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
အတူတူ Marquinhos အလယ်ပိုင်းကာကွယ်ရေးနှင့်အတူ Villarreal Alvaro ကနေယုံကြည်စိတ်ချရသော tsentrbek ဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ စပိန်အလယ်ပိုင်းနောက်ခံလူ, La လိဂ်၏အောက်ခြေကနေအဝါရောင်ရေငုပ်သင်္ဘောဆွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြသူအနည်းငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူက 8.0 whoscored တစ်ဦးထံမှထင်မြင်ချက်ခံ ယူ. ဆီဗီလာဆန့်ကျင်သူ့အဖွဲ့ရဲ့ပွဲစဉ်အတွက်အကောင်းဆုံးခံစစ်လိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ÁlvaroဇာလSoberón4ဝေဟင် duels အနိုင်ရခဲ့ခြင်းနှင့်စင်ကြယ်သောရွေးချယ်ရေး၏3ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ထိုရက်သတ္တပတ်၏အသင်းအတွက်တတိယဗဟိုနောက်ခံလူရောမလာဇီယို၏တံခါးဝ၌အနိုင်ရရည်မှန်းချက်သွင်းယူသူကိုလက်ဝဲ Lateral ဂျီနိုအာ Domenico Criscito မှထွက်လှည့်။ ဒါဟာအီတလီအားမိမိပြန်လာပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးရည်မှန်းချက် Domenico ပဲ! စိန့်ပီတာစဘတ်ဇင်းနစ်မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးစဉ်ကိုသူခုခံကာကွယ်အပေါ်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်လာနှင့်တိုက်ခိုက်မှု၏ရည်မှန်းချက်မှာရည်ရွယ်ထားပါတယ်ကြောင့်၎င်း, တစ်ဦးဘောလုံးကစားသမားများအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။
Criscito3အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ယူနစ်ကြီးပြင်း။ ကာကွယ်6skillpunktov အားဖြင့်ကြီးပြင်းရသောသပိတ်, ရပ်နေကြ၏။
ကာကွယ်ရေးလက်ဝဲနံပါးတွင်တစ်ဦးဘာသာစကား Bavarian တောင်ပံကစားသမား Kingsley Coman တင်လိုက်တယ်။ ဒီအစာရှောင်ခြင်းပြင်သစ် SuperClubs ဥရောပခြင်းဖြင့်ဝမ်းလျှော, ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ PSG အသင်းနှင့်ဂျူဗင်တပ်စ် Coman Bavaria ၌မိမိခံစားရပြီးနောက်။ အဆိုပါကစားသမား Augsburg ဆန့်ကျင်ပွဲစဉ်အတွက်အသင်းမှဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ, နှစ်ကြိမ်သွင်းယူနှင့်လက်ျာကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ကာကွယ်ရေးရန်မအခွင့်အလမ်းထွက်ခွာ။
Comana developer များ2ယူနစ်အားဖြင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထမြောက်တော်မူခြင်း, အနည်းငယ်ဂီယာဤမျှမြန်ဆန်စွာတောင်ပံကစားသမားအမြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
ညာဘက်တောင်ပံဂျာမန်တောင်ပံကစားသမား Kerem Demirbay အပေါ်တည်ရှိပါတယ်။ ကွင်းလယ်လူ Hoffenheim Hanover ၏ရှုံးနိမ့်အတွက်တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကစားသမားတစ်ဦးရည်မှန်းချက်သွင်းယူကာတိုက်စစ်မှူးဣဇာက်သည် Belfodila မှကူညီ။
အဆိုပါကဒ်အသစ် Demirbaya အရှိဆုံးသစ်ကိုဂျာမန်အသင်းတော်များတွင်ဆည်းကပ်၏တဦးတည်းဖြစ်ခြင်း,5ကျွမ်းကျင်မှုယူနစ်အားဖြင့်အဆင့်သို့တက်။ အဆိုပါကစားသမားမြန်နှုန်းကျွမ်းကျင်မှု, သက်ရောက်မှုများနှင့်တိကျစွာဂီယာတက်ခူး။
စပိနျဘယ်လ်ဂျီယံနှစ်လုံးကိုစောင့်ဆိုင်းကစားသမားများ၏ဗဟိုဇုန်၌တည်၏။ Girona Porto ကွင်းလယ်လူမြို့တော်မက်ဒရစ်ဆန့်ကျင်အစည်းအဝေး၏သူရဲကောင်းများတဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကအစည်းအဝေး၏ 75 မိနစ်အတွင်းအနိုင်ရရည်မှန်းချက်သွင်းယူနှင့်နောက်ဆုံးပေါ် desyatiminutku တော်ဝင်ကလပ်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အပူတပြင်းကာကွယ်ရေးရန်သူ၏ရဲဘော်ရဲဘက်မှုတ်သွင်းသူတစ်ဦးအဖွဲ့သည်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါကဒ်အသစ်ခရစ်ယာန် Portuguesa3မှတ်အားဖြင့်တိုးတက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ developer များကစားသမားသွားတာ, dribbling နှင့်အစာရှောင်ခြင်းမှတက် hiked ပါပြီ။
ပိုကောင်းတဲ့ပုံစံကိုဘယ်လ်ဂျီယံ tofgay Raja Naingolan မှပြန်လာသောစပိန်-CPU ကို shnikom နှင့်အတူမတ်တပ်ရပ်တွဲ။ Sampdorogii opornik ဆန့်ကျင်ပွဲစဉ်အတွက် 78 မိနစ်အတွင်းအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ရည်မှန်းချက်မှတ်သား။ Raja တဖြည်းဖြည်း ပို. ပို. တောအနှင့်စူးရှတိုက်ခိုက်မှုကနေအလယ်တန်းခိုင်မြဲသစ်ခေါင်းဆောင်အင်တာမီလန်ဖြစ်လာနေသည်။
အထွေထွေအဆင့် 1 ကျွမ်းကျင်မှုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့် player သိသိသာသာမပြောင်းပါဘူးပါစေပေမယ့်အီတလီစီးရီးအေ၏မိတ်ဆွေတို့ကိုအသင်းတော်များတစ်ဦးကအလုပ်တခုကိုထပ်ပြောသည်: တစ်ခုတိုးတက်လာသောထိခိုက်မှုနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်အတူဗဟိုတိုက်စစ်ကွင်းလယ်လူတစ်ဦးဗားရှင်းသစ်ကိုဖမ်းရန်။
Braga နဲ့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စအားကစားပွဲ၏သူရဲကောင်းတည်ရှိသောတစ်ပတ်ကနေဘယ်ဖက်ခြမ်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်။ တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကွင်းလယ်လူလစ္စဘွန်းအတွက်ဧည့်သည်များရဲ့ရှုံးနိမ့်၏အစဟုမှတ်သားခဲ့သည်။ ဒုတိယအနေနဲ့တိုက်စစ်မှူး Bas ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်နေစဉ်ကစားသမား, ပထမနှစ်ဝက်အတွက်ရည်မှန်းချက်သွင်းယူပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါကဒ်အသစ်ဖာနန်ဒက်ဇသုံးမှတ်အားဖြင့်အဆင့်သို့တက်။ အဆိုပါကစားသမားကိုပိုမိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖြစ်လာခဲ့ပါသည်, သူ၏ 'passes radioupravlyaemosti အဆင့်အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ စစ်မှန်သောပြုလုပ်သည့်အဖွဲ့သည်၌ဤကစားသမားရနိုင်, စိတ်ကူးဖို့ခက်ခဲသည်။ ပရိတ်သတ်တွေပေါ်တူဂီဆန့်ကျင်၌စုသိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ချန်ပီယံရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဤမျှလောက်ဘူး။
တိုက်ခိုက်မှု၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်မကြာသေးမီကထိုရက်သတ္တပတ်၏အကောင်းဆုံးစာရင်းတွင်သို့ရတဲ့အတှကျအ EA ၏ကိုယ်စားလှယ်များကပြင်ဆင်ထားတဲ့ပိုလန်တိုက်စစ်မှူး Krzysztof Pontek, ဖြစ်ထွက်လှည့်။ အဆိုပါကစားသမားသည်သူ၏အေစီမီလန် Atalanta အလျှော့ကျော်အနိုင်ရကူညီပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါဝင်ရိုးစွန်းစီရော်နယ်ဒိုအဘို့အ bombardirsky ပြိုင်ပွဲအတွက်ချဉ်းကပ်, သွင်းယူနှစ်ခုရည်မှန်းချက်များဖြင့်မှတ်သားခဲ့သည်။
Ponteka ကဒ်ခြောက်လမှတ်ခြင်းဖြင့်အဆင့်မြှင့်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါကစားသမားကိုမှန်ကန်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရလဒ်များကိုပြသထားတယ်, ဒါကြောင့်မြန်နှုန်း dribbling နှင့်အပြေး, ဘောလုံးသက်ရောက်မှုတိုးတက်အောင်ခဲ့ပါတယ်, ဒီအခြိနျမှာစာသင်ခန်းထဲမှာနှင့်ကို virtual လယ်ကွင်းဖီဖာ 19 အတွက်တိုးလာခံထိုက်။
ပတ်တိုက်ခိုက်မှုများ၏အသင်းအမှတ်နောက်ဆုံးတော့တက်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြပုံရသည်သူကား, ထာဝရကလေးကသက်သေပြခဲ့သည်။ မာဆေးမှ Nice ကနေပူးပေါင်းသူကိုမာရီယိုရှုံး, သစ်ကိုကလပ်များတွင်ဖမ်းမိ။ Amiens တိုက်စစ်မှူးဆန့်ကျင်အိမ်မှာပွဲစဉ်အတွက်ဘောလုံးကိုအိတ်ထဲနှင့် 15 ကြိမ်ပြိုင်ဘက်တံခါးခြိမ်းခြောက်သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။
လေ့လာသူ Olympique2ယူနစ်အပေါ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထမြောက်တော်မူ။ ရှုံးသက်ရောက်မှုများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဂိမ်းဦးခေါင်းတိုးလာကြပါပြီ။
ယင်းခုံတန်းရှည်တွင်ချွန်ထက်တိုက်စစ်ကစား၏ပရိသတ်များမှသတိထားရမှာတန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြောင်းအနည်းငယ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းကစားသမားခဲ့ကြသည်။ သင်သည်သင်၏ကလပ်၌ကြီးစွာသောမန်နေဂျာရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်ဗဟိုဧဝကို Fiorentina ယော်ဒန်မြစ်ဗိုင်းလိပ်တံကိုကြည့်။ 82 တစ် rating နှင့်အတူအသစ်ကဒ်ဂီယာနဲ့ dribbling များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုမှထမြောက်တော်မူ။
82 ယူနစ်တစ်ခုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ဂါလာတာတောင်ပံကစားသမားအယ်လ်ဂျီးရီးယား Sofiane Feghouli ညာဘက်တောင်ပံပေါ်နှင့်တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ် dribbling လုပ်ရညျအသှေးလက်ဝါးကပ်တိုင်စင်တာပြီးနောက်စစ်မှန်သောဒုံးပျံဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒီ pass ၏ Addressee Cagliari တိုက်စစ်မှူးလီယိုနာဒို Pavoletti ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မြင့်မားသောအီတလီဒဏ်ငွေဦးခေါင်းကစားနှင့် 82 တစ် rating နဲ့သူ့ရဲ့ကဒ်ကိုသင်မြင့်မားသောလေထုထဲသို့ဘောလုံးကိုပျံသန်းဖို့မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းပြိုင်ဘက်ခန္ဓာကိုယ်ဆိတ်ကွယ်ရာတွန်းအားပေးရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
တစ်ပတ် XXIII ၏ရေးအဖွဲ့ motley နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှည့်။ တချို့ကကစားသမားထိပ်တန်းပရိသတ်အဘို့နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများ၏ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်လဲကြမည်ဖြစ်သည်။